GUDIGA JOOGTADA AH EE GOLAHA XILDHIBAABNADA AYAA SOO KORMEERAY QAAR KAQMIDA XAFIISYADA HEER DEEGAAN. – Kaalinews.net
(Kaalinews.net) Gudiga joogtada ah ee goolaha xildhibaanada soomaalida ayaa soo kormeeray xafiisyada qaarkamida heer deegaan.
Gudida joogta da ah ee golaha xildhibaanada soomaalida oo ay hor kacayso afhayeenada golaha baarlamanka dowlad deegaanka soomaalida marwo Fardowsa maxamed iyo xafiiska xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida mudane Cabdiriishiid Cali ayaa waxay kormeer kutegeen xafiisyada qaar kamida heer deegaan.Ujeedada kormeer kooda ayaa ahayed sidii looga wada shaqayn lahaa gudiga joogtada ah ee golaha xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida. Iyo sidoo kale xafiisyada heer degaan. Ugu horayna waxaa halkaa kula dardaarmay gudiga joogtada ah ee dowlad deegaanka soomaalida afhayeenka baarlamanka dowlad deegaanka soomaalida.
Mudane Cabdi Maxamed waxana uu yidhi sida tan.waxa weeyaan in siwada jir ah gudiyadan baarlamanka ay kormeer shaqo ugu tagaan xafiisyo aan qorshaynay in gudiyadu kormeer shaqo ugu tagaan. maadama ay yara adkaatay in xafiisyadii iyo gudiyadu ay isla fahmi waayeen qaabka wada shaqaynta gudiyada iyo xafiisyada. In markaasi si wadajira gudigan iyo gudoomiyayaasha baarlamanka oo ay hogaaminayso afhayeen kuxigeenadu in ay markaas ay xafiis walba ay tagaan.Oo lasameeyo isbarasho gudiyadii iyo xafiisyadii laisbaro. Si ay u yeeshaan wada shaqayn dhab ah.IN ay howlahaas ka howlgalaan ayuu anaga qorsheheenu yahay.Taa markaanu leenahay maha micnaheedu xafiis ayaa la weerarayaa ee waxaan rabnaa in gudiyadu ay si degan ay ugalaan shaqadooda. Si markaas ay u saxaan waxii dhaliilo ah oo jira markaas.Sidoo kale in xiriidhka wada shaqaynta xafiisyada iyo gudiyada sidii loo xoojin lahaa in ay ka wada hadlaan ayuu qorsheheenu yahay.
Intaas kadib waxay soo kormeereen xafiiska nabadgelyada dowlada deegaanka soomalida. Iyo xafiiska gaadiidka iyo ganacsiga dowlad deegaanka soomaalia.Waxaana halkaas warbixino laga dhegaystay su,aalona laga waydiiyey hogaan ku xigeenka xafiiska nabadgelyada dowlad deegaanka soomalida iyo sidoo kale wasiirka xafiiska gaadiidka iyo ganacsiga iyo warshadaha dowlad deegaanka soomaalida
ujeedada kormeerkan ayaa waxa warbaahinta deeganku ay gaar ahaan SRTV ay waxay waraysi la yeesheen afhayeenad kuxigeenka golaha baarlamanaka marwo Fardowsa Maxamed waxayna tidhi sidatan: waxaanu ku wada soconay todoba gudi oo kuwa joogtada ah gudiwalbana ay hoos imanayaan xafiisyo dhowra.Sida arimaha bulshada, Nabadgelyada iyo cadaalada iyo xafiisyada horumarinta, dhamaan ahmiyada uu daarnaa socdaalkayagani waxa uu ahaa in aan marka horeba aanu eegno wadashaqaynta ka dhaxaysa xafiisyadan iyo gudiyada golaha baarlamanka. Waayo waxaynu ogsoon nahay in sistemkii hore iyo sistemkani kala duwan yahay. Taasi oo ku tusinaysa in gudiyada baarlamanku ay shaqeeyaan iyo waxqabadka xafiisyada deegaanka oo aan ahayn buun buunin ee ay tahay waxqabad dhab ah iyo wadashaqayn fiican.Sidaa daraadeed kormeerkan ay sameynayaan gudiga joogtahada ah ee xildhibaanada golaha baarlamanka dowlad deegaanka soomaalida ayaa sii socon doonaa.